musha Asia Akasanganiswa Maartist Islam Makhachev Childhood Nhau Plus Untold Biography Chokwadi
Yedu Islam Makhachev Biography inokuudza chokwadi nezve ake ehucheche Nyaya, Hupenyu hwepakutanga, Vabereki, Nhengo dzemhuri, Musikana / Wife kuva, Vanin'ina, Hupenyu Hwega, Mari, Mararamiro, uye Net kukosha.
Mune mashoma mazwi, chinangwa ndechekuburitsa zvakadzama kutarisisa kweuyu nyanzvi akasanganiswa nemasoja. Yedu nyaya inotanga kubva panguva yekuzvarwa kwake kusvika mukurumbira wake.
Isu takafunga kuti zvakakodzera kukuunzira yake Yekutanga Hupenyu uye Kubudirira mifananidzo kuti unakidze fancy yako. Tarisa gallery yezviitiko zvakakomberedza hupenyu hwake kubva pakutanga kwake kwakaderera.
Islam Makhachev Biography: Tarisa Hupenyu hwake uye Kubudirira Nyaya.
Hongu, isu tese tinomuziva kuti akwikwidze muChiedza chikamu cheUltimate Fighting Championship (UFC).
Islam Makhachev zvakare ari Combat Sambo World Champion. Kunze kwemubairo wake nemarekodhi, takaona kuti vangani vanhu vachiri kuziva nhoroondo yehupenyu hwake.
Nekuda kweizvozvo, isu takafunga zvakanaka kwazvo nemufaro wese kukuunzirai inonakidza ngano yeIslam Makhachev. Pamusoro pekuparara kwezviitiko zvake zvewrestling. Saka, nezvakawanda ado, ngatitangei.
Islam Makhachev Yemwana Nhau:
Nekuda kweiyi memoir, isu tichatanga nekutaura nezve nhoroondo yake yekuzvarwa. Islam Ramazanovich Makhachev akauya munyika ino musi waSeptember 27, 1991.
Akazvarwa kuvabereki vake kuMakhachkala, Dagestan ASSR (Dagestan Autonomous Soviet Socialist Republic), Russian SFSR, Soviet Union (yava Makhachkala, Dagestan, Russia).
Murwi weMMA akapedza hudiki hwake kwaakaberekerwa muMakhachkala, Dagestan, Russia.
Akakurira mumusha uri kure weBurshi, kwaakagamuchira mirayiridzo uye akakwikwidza muhondo sambo (unyanzvi hwehondo hwakabva kuRussia).
Mukubvunzurudzwa, Islam Makhachev akataura kuti akapinda muzvikanganiso zvakawanda paakakura muBurshi. Vanhu vemuraini vakamuona semunhu asina simba sezvo aifanira kutama kubva kwaakaberekerwa.
Mufananidzo wevacheche mufananidzo weIslam Makhachev.
Chikonzero chavo ndechekuti Makhachkala muDagestan inzvimbo yemadhorobha kana ichienzaniswa neBurshi.
Saka, Islam Makhachev aive neruzivo rwake rwekukura pakatarisana nemukurumbira wekuRussia musanganiswa wemauto ehondo (MMA) uye akasiya pamudyandigere nyanzvi yakasanganiswa yehondo, Khabib Nurmagomedov.
Kukura naKhabib Nurmagomedov akaita basa rakakosha mukusarudza kwake basa uye dzidzo zvakare.
Pachinyorwa chinofadza, vese vari vaviri vachiri kudzidzira pamwe chete kusvika panguva ino. Zvikamu zviri pazasi zvinotsanangura zvakare Kurerwa kwaIslam Makhachev uye Hukama naKhabib.
Islam Makhachev Mhemberero Yemhuri:
Mutambi anozvarwa kuRussia anouya kubva kumba ane yakanaka mutsimba kumashure. Vabereki vake vaive varombo, vaingova nezvakaringana kuve nechokwadi chekuti nhengo dzekumba dzinowana zvinodiwa nevanhu zvehupenyu, senge kudya, pekugara, uye zvipfeko.
Islam Makhachev Mhuri Kubva:
Sezvambotaurwa, Mukwikwidzi Sambo World Champion akaberekerwa muMakhachkala, mumwe wemaguta makuru akashanyirwa muRepublic of Dagestan muRussia. Guta rinogara muGungwa reCaspian uye rinozivikanwa zvakare seNyika yeMakomo.
Makhachkala ane anopfuura makumi matatu emadzinza emadzinza enharaunda. Nekudaro, madzitateguru eIslam Makhachev ndeeRudzi, mukati meDagestan kuNorth Caucasus.
Vagari venzvimbo ino yetsika nemagariro, Lakia, vanotaura mutauro wechiRak. Pazasi pane Mepu inoratidza, mune zvine musoro mazwi, yake mhuri midzi.
Mepu inoratidza midzi yemhuri yeIslam Makhachev.
Basa raIslam Makhachev Pakutanga:
Semunhu mudiki akura achida mutambo unoita, Islam Makhachev akaramba kutambisa nguva yake achifunga kuita yakavhenganiswa martial arts basa. Kushamwaridzana kwake kwakasimba nemhare yepasirose yakasanganiswa muartist, Khabib Nurmagomedov aive nebasa rake.
Islam Makhachev akaita yake yakavhenganiswa yeMixed Martial Art (MMA) kutanga muna Nyamavhuvhu 2010. Mutsimba uyu waipesana naMagomed Bekbolatov muTsumada Fighting Championship. Neraki kwaari, akabuda achikunda kuburikidza nesarudzo imwechete.
Pazuva re12th raFebruary 2011, akaita yake M-1 Global kutanga kurwisa Tengiz Khuchua. Islam Makhachev akakundazve bongozozo asi kuburikidza neKnock Out panguva ino munharaunda yekutanga.
Islam Makhachev Dzidzo:
Kunge vazhinji veMixed Martial maartist ane basa rekutanga rinotanga, Islam Makhachev anga aine shoma kana nguva yekugara mumadziro mana (4) ekirasi yekudzidzira. Kunyangwe hazvo aifanira kunge akapinda chikoro chepuraimari kumba kwake, Burish.
Vechidiki vechiIslam, zvisinei, kunze kwedzidzo yakajairwa, vakawana dzidzo isina kurongwa. Kudzidziswa kwake kwaizomubatsira kubuda zvinobudirira sehunyanzvi hwakasanganiswa nehondo yemasoja. Makhachev aive nesimba muzvidzidzo zvake uye ndicho chaive chikuru chake chakavanzika chekubudirira.
Islam Makhachev Biography - Mugwagwa Unoenda Mukurumbira Nhau:
Achirwira nzira yake kuenda kumusoro, musi wa9 Nyamavhuvhu 2013, Islam Makhachev akamira achipesana naMansour Barnaoui paM-1 Dambudziko 38 mumakwikwi ake echipiri ekusimudzirwa. Kungofanana nekutanga kwake, akakundazve nesarudzo yemubvumirano.
Shure kwaizvozvo, musi wa21 Nyamavhuvhu gore rimwe chetero, Islam yakatarisana isingakundwe muBrazilian Jiu-Jitsu bhandi dema Rander Junio, paM-1 Dambudziko 41. Akabuda zvakare achikunda mumakwikwi kuburikidza sarudzo imwe.
Islam inotonga mitambo yake nezvibhakera asati apedza. Mumutambo wake wekupedzisira wakatarisana naIvica Truscek, akamira akakundwa pamusoro pemutambo uyu murondedzero yechitatu kuburikidza nekutumira. Kubva ipapo, akamira semumwe wevanhu vasina kurohwa.
Islam inotonga mitambo yake nezvibhakera asati apedza.
Islam Makhachev Biography- Kumuka kune Mukurumbira Nhau:
Akadzikama achitsvaga nzira akananga kuonekera, Makhachev akahwina menduru yegoridhe mu2016 World Combat Sambo Championship. Akabuda ari pamusoro mumutambo wekupedzisira aine 7-0 pamusoro paValentin Akadzingwa muBulgaria.
Islam yakazoenderera mberi nezvidzidzo zvayo uye ikavandudza zvakanyanya zvichienzaniswa nezvaiitwa kare. Wrestler ane imbwa akazviwanira kuhwina kwakawanda kwakawanda, mazhinji acho akakunda kuburikidza nesarudzo yemubatanidzwa.
Islam Makhachev ane anoshamisa Makumi maviri ekukunda uye chete kurasikirwa mune rake MMA basa.
Zvizhinji gare gare, muna Kubvumbi 2019, Islam yakapinda mumutambo wekurwa uyo waizomuunzira kurwa kweMubairo wehusiku. Akatarisana naArman Tsarukyan kuUFC pane ESPN + 7, kwaakakunda mumakwikwi kuburikidza nesarudzo imwechete.
Kubva muna Chikunguru 2021, Islam Makhachev ane anoshamisa Makumi maviri ekukunda uye chete kurasikirwa mune rake MMA basa. Kunze kwekuve Mumiriri weSambo Yenyika Sambo, anoita sechiverengero che9 muUFC lightweight masosi kubva muna Chivabvu 2021. Kuti uwane rumwe ruzivo, tarisa clip iripazasi.
Ndiani Islam Makhachev Musikana?
Mubati weRussia uye mutsigiri wemauto akaburitsa zvishoma nezve hupenyu hwake hwega. Kunyangwe paine kubvunzurudzwa kwakawanda, zvave zvichinetsa kuwana chero chinhu chakakosha nezvake kana chero munhu akabatana naye.
Nekudaro, zvakave nerunyerekupe kuti Islam Makhachev akaroora pazuva re8th yaApril 2021, kuMakhachkala, Dagestan. Nyeredzi isingaremi yakasunga mapfundo pamwe chete nemurume wake mushure mekukunda Dober kuUFC 259.
Akatsvaga nzvimbo yekutandarira nezviuru zveshamwari dzaivepo. UFC nyeredzi senge Khabib Nurmagomedov, Zubaira Tughukov, anga aripo mumutambo wese. Kunyange zvakadaro, zita remwenga kana ruzivo nezvake haruwanike panguva ino.
Islam Makhachev Hupenyu Hwemhuri:
Iyo Russian Mixed Martial Artist inochengetedza zvakavanzika maererano nevabereki vake, hama, dzimwe hama, uye hupenyu hwega. Naizvozvo, zvave zvakaoma kwatiri kuunganidza ruzivo rwakadzama maererano nasekuru nasekuru vake, vabereki, vanun'una, uye hama.
Zvatataura zvese izvo, ngatitorei nekukurumidza kuputsa kwezvatinoziva nezve nhengo yega yega yemba.
Mufananidzo weIslam Makhachev nevanhu vaanoti mhuri kuratidza zita rake reUFC Championship.
Pamusoro pevabereki vaIslam Makhachev:
Isu tinoziva kuti Islam Ramazanovich Makhachev akaberekerwa muDagestan kuna amai vake nababa muna 1991. Zvakapesana, mazita evabereki vake vese haana kutaurwa. Zvisinei, isu tinoziva kuti vese vabereki vake ndevekuLak kwakatangira muRussia.
About Islam Makhachev's Siblings:
Izvo zvakare zvinoita uye zvinonyanya kuitika kuti iyo Combat Sambo World Champion ine vamwe vanun'una kubva kuvabereki vake, ingave hafu kana izere neropa. Vanin'ina vaIslam Makhachev vanofanirwa kudada nekuwadzana nehama yavo, asi isu tichiri kuti tizive kuti ndivanaani.
Mutambi akaberekerwa muRussia ndewemhuri inoshanda nesimba kuti ichengetedze ruzivo rweimba yavo sehungwaru sezvinobvira.
Zvisinei, Islam Makhachev anofanira kuva nedzimwe hama kunze kwevabereki vake, nevanin'ina. Dzimwe hama dzake dzinosanganisira vanababamunini, vanatete, nasekuru nasekuru.
Islam Makhachev Hupenyu Hwega:
Makhachev anoshandisa yakawanda yenguva yake kudzidzisa MMA uye kuita zvakasiyana zvekuzvivaraidza kakawanda kupfuura kwete.
Anofarira kutamba nhabvu, kugara akasimba mujimu, kubata hove ibasa rake, uye kukwira makomo. Moreso, anodawo mabhiza uye anowanzoonekwa achiatasva.
Collage inoratidza zvido zveIslam.
Iye akanaka anoshinga uye anozivikanwa pasocial media, aine ega uye akasimbiswa maakaunti pamapuratifomu makuru. Ane mamirioni matatu evateveri ve Instagram uye ane vangangoita 3k vateveri pa Twitter.
Islam inoshandisa nhepfenyuro yake yekuvandudza vateveri vake vakawanda.
Islam Makhachev Mararamiro:
Hwakakura uye hukuru hwakaburitswa nevazhinji Mixed Martial artists vanotaura zvakawanda nezvekuti mafuta akaundi emabhangi anofanira kunge achiverenga sei. Islam Makhachev haina kusunungurwa. Akaita mari zhinji achirwira uye kuhwina machisi ake.
Kukunda kwake uye mibairo zvakasimudzira kukosha kwake mune rake rese basa. Nekudaro, iye anokwanisa kutenga dzimba dzepamusoro uye mota. Anoda Sportscars.
Islam Makhachev Net Kukosha:
Hondo dzeMixed Martial Artist UFC yagara iri nzvimbo yekukwezva. Mambure avo akakosha anonzi anofarirwa. Sekureva kweMedia Referee, Islam Makhachev mambure akakosha anoda kusvika madhora mazana mashanu ezviuru kubva muna 500,000.
Mari yaanowana kubva kuhondo yekupedzisira kurwisa Drew Dober ingangoita $ 105,000. Mimwe mari inowanikwa inosanganisira anofungidzirwa kuti $ 63,000 paakatarisana naDavi Ramosin munaGunyana 2019 uye $ 109,000 muna Nyamavhuvhu 2018 vachikunda kurwisa Arman Tsarukyan.
Isu takafananidzira Islam zvakasarudzika kushambadzira zvinowedzera izvo zvinobatsira hutano hwakanaka uye kuwedzera hutachiona. Chigadzirwa icho chi dema kumini mafuta inozivikanwa seAlhadaya. Iyo nhema nhema kumini mafuta zvakare ine yese seti yemavitamini inodiwa kumuviri.
Pamusoro pemafuta ekumin nhema, isu takamuonawo achimaka imwe yekuwedzera inonzi Fitrod. Ramazanovich, saizvozvowo, ndiye mushambadzi wekusimudzira weiyo Gorilla simba chinwiwa.
Islam Makhachev Untold Chokwadi:
Kunze kwenyaya yehupenyu yakataurwa kusvika parizvino, hezvino zvinonakidza Chokwadi NezveIslam Makhachev uye yake yakavhenganiswa yekarati basa.
Chokwadi # 1: Inonakidza Rekodhi:
Parizvino, chiIslam, mumakwikwi ake ese, chaita kurasikirwa chete. Kurasikirwa kwake chete muUFC kwaipesana naAdriano Martins iyo yaibata musi we3 Gumiguru 2015. Adriano Martins akatonga mamiriro ese panguva yemutambo kubva pakutanga chaipo uye akahwina mumutambo wekutanga.
Chokwadi # 2: Islam Makhachev's Ban:
Makhachev aifanirwa kusangana naDrew Dober pazuva regumi nematanhatu raKubvumbi, 16. Mushure mekuyera kurema, iyo UFC yakazivisa Makhachev akange akundikana kuongororwa kwemushonga-kunze kwemakwikwi, kuyedza kuti kune anti-ischemic meldonium.
Nekuda kweizvozvo, mutambo wakanzurwa. Neraki reIslam, mazhinji gare gare muna Chikunguru wegore rimwe chetero, USADA yakasimudza kumiswa kweMakhachev mushure mekunzwa kubva kudare.
Nekudaro, Muna Kurume 2021 Islam yakatemerwa kurwa naDrew Dober zvakare. Asi panguva ino kubatanidzwa kwakaitika, uye Makhachev akapwanya Drew Dober neyechitatu-kutenderera ruoko-katatu. Pasinei naizvozvo, imwe yeMMA inotyisa, Nate Diaz akatsanangura mutambo seanofinha.
Chokwadi #3: Chitendero cheIslam Makhachev:
Islam Makhachev, kunze kwekuva chizvarwa cheRussia, chiIslam chakazvipira, sekuratidzwa kwezita rake. Akambobuda muMMA pakutanga kwaNyamavhuvhu 2017, achitsanangura chikonzero chechitendero, uye Mads Burnell akamutsiva.
Kurwa kwakarongerwa kuitika naMichel Prazeres pazuva rechipiri raGunyana 2, kuUFC Fight Night 2017.
Chokwadi # 4: Khabib Nurmagomedov's protege:
Makhachev ane chiyero chepamusoro ari pakati petarisiro pasi peutariri hwaKhabib Nurmagomed. Saka zvave zvakanyanya kuenzaniswa nemudzidzisi wake, mukoma, uye shamwari.
Vanhu vazhinji vanomuona saiye anotevera Khabib. Nenzira imwecheteyo, Khabib paari kuenda pamudyandigere, anoronga chiIslam kuti azadze nzvimbo yake.
Makhachev akawana marori ane mukurumbira uye hype kubva Khabib Nurmagomedov. MMA ari pamudyandigere akamuzivisa iye samambo asina korona yeboka reLightweight.
Saka kuisa Islam Makhachev pane izvo zvekuve chikamu cheTeam Khabib. Islam inofungidzirwa kuti inobata bhandi kwenguva yakareba kana ichinge yatora.
Islam Makhachev Biography Pfupiso:
Yedu wiki ruzivo rwekutanga rweIslam Makhachev ndeye pa-iyo-iyo-kutarisa pfupiso yehupenyu hwake nhoroondo. Tafura iripazasi ichakubatsira iwe kuwana ruzivo rwechokwadi muchidimbu uye nemazvo.
Zita rizere: Islam Ramazanovich Makhachev
Zuva rekuzvarwa: 27th Zuva raGunyana 1991
Nzvimbo yekuzvarirwa: Makhachkala, Dagestan ASSR, Russian SFSR, USSR
Basa: Yakasanganiswa martial artist uye Actor
Tema: American Kickboxing Academy (AKA), Fight Spirit Team, Gadzhi Makhachev freestyle, wrestling club, Old School Fighters, KHK MMA Team uye Eagles MMA
Ramba: International Master weMitambo muCombat Sambo
uremu 155 lb (70 kg; 11 st 1 lb)
Kunobva Pfuma: Nyanzvi yakasanganiswa yemasoja eUFC, Endorsements, Bhizinesi neMedia mashandiro
Net Worth: $ 500,000 (2021)
Muhoro: $ 105,000 (2021)
Isu tinovimba kuti wakanakidzwa neIslam Makhachev Biography uye Yehucheche Nyaya. Isu takacherekedza kuti hukama hwake hwepedyo naKhabib Nurmagomedov, vese murairidzi uye shamwari, hwakafurira sei basa rake reMMA.
Nekudaro, kune akabudirira kuraira-muperekedzi, iye anoteedzera anofanira kunge akaramba akazvininipisa. Islam Makhachev iri nyore kururamisa, kunyangwe achiwedzera marumbidzo uye zvinyorwa zvinonakidza.
Wakawana here Islam Makhachev Biography uye Yehucheche Nyaya kuti ibatsire? Saizvozvo, mune chero chimwe chinhu chingatibatsire maererano nemaitiro akanakisa? Ndapota titumirei mhinduro kuti tizive.
Zvikasadaro, tinokutendai nekuverenga uye nekuramba makabatana kune mamwe biography chokwadi chine sterling chaiyo.